किन गरे श्रीमानले यस्तो ? मीनाले काम गर्ने विद्यालयका शिक्षकले खोले यस्तो रहस्य (भिडियो) « Etajakhabar
किन गरे श्रीमानले यस्तो ? मीनाले काम गर्ने विद्यालयका शिक्षकले खोले यस्तो रहस्य (भिडियो)
प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार २२:३७
मकवानपुर– मकवानपुरकाे हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१८ हर्नामाडीमा श्रीमतीकाे ह त्याकाे आशंंकामा प्रहरीले श्रीमान लाइ पक्राउ गरेकाे छ । स्थानीय २० वर्षीय मिना अधिकारीको ह त्याकाे आशंंकामा श्रीमान एकराज अधिकारीलाइ पक्राउ गरेकाे हाे ।
हेटौँडा–१८ जयतारस्थित पन्चकन्या बिद्यालय नजिक आइतबार बिहान युवतीकाे शव फेला परेकाे थियाे । स्थानीय बासिन्दाले घर नजिकैको गहुँबारीमा श व फेला पारेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
उनकाे ह त्याकाे आशंकामा प्रहरीले श्रीमान एकराज अधिकारीलाइ नियन्त्रणमा लिइएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएकाे छ । विषयमा थप अनुसंधान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक शुशीलसिंह राठोरले जानकारी दिनुभएको छ । मृ तक महिलाको श व हेटौंडा अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।